स्व. साहना प्रधानका केहि सम्झनाहरु
महिला आन्दोलनको एक परिचित नाम हो साहना प्रधान । वहाँले यो संसारबाट विदा लिनु भएको पनि पाँच बर्ष विति सकेकोछ । मैले पंचायत कालमा महिला अधिकारको निम्ति लड्दाको बखत साहना प्रधानको नाम बारम्बार सुन्ने गर्दथें । उहाँले वर्मामा शिक्षा प्राप्त गर्नु भएको थियो रे । वहाँले राणा प्रधानमन्त्री समक्ष महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने वारेमा कुरा राख्नु भएको थियो रे । वहाँ कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठकी धर्मपत्नी हुनुहुनुन्थ्यो रे आदि ।
२०३७ सालमा अखिल नेपाल संघको पुर्नस्थापना भयो । त्यही संघमा मैलै धेरै बर्ष महासचिवको रुपमा काम गर्ने मौका पाएँ । मेरो जिम्मामा केन्द्रिय कमिटिको बैठक संचालन गर्नु, जिल्लाका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा जानु, कामको प्रतिवेदन संकलन गर्नु, आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सघाउनु, उपत्यकाका आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु, पर्चा निकाल्नु, संघको मुखपत्र ‘महिला मुक्ति’ निकाल्नु, महिला मुक्तिको नाममा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नु, भुमिगत महिलाहरुको निम्ति अन्न कपडाको व्यवस्था गर्नु, भुमिगत सुत्केरी महिलाहरुको व्यवस्थापन गर्नु, जेलमा भएका साथीहरुको लागि दशैं, तिहार टिका कार्यक्रम आयोजना गर्नु, संघको आर्थिक हिसाव किताव दुरुस्त पार्नु, पार्टीलाई सहयोग जम्मा पार्नु आदि कामको जिम्मावारी लिनु पर्दथ्यो । त्यस बाहेक पार्टी, शिक्षक संगठन, मजदुर संगठन, पार्टीको प्रकाशन, पार्टी दस्तावेजहरुको सुरक्षा, विभिन्न बैठकहरुको व्यवस्थापन, भूमिगत सभा संम्मेलनहरुको आयोजना आदि जिम्मेवारीहरु पनि पुरा गर्नु पर्दथ्यो । सारांसमा भन्दा कमिटीहरुमा थोरै सदस्य संख्या हुन्थे । जो हुन्थे, उनीहरुले कडा मेहनत गर्नु पर्दथ्यो । कार्यकर्ताहरुले दिनको बाईस तेईस घण्टा पनि काम गर्दथे । धेरै रातहरु नसुती विताएका क्षणहरु म कहिले काहिँ सम्झने गर्दछु ।
साहाना प्रधानसंग मेरो भेट महिला मुक्ति पत्रिकाको लागि लेख छाप्ने सिलसिलामा भएको थियो । पञ्चायतकालमा महिला मुक्ति जस्तो पत्रिका निकाल्ने काम सजिलो थिएन । जनताहरुलाई बोल्ने, लेख्ने, सभा, सम्मेलन गर्ने अधिकार थिएन । सुरक्षा कानून थियो । उक्त कानूनको आधारमा पञ्चायतको भन्दा फरक विचार राख्ने वित्तिकै मानिसहरुलाई गिरप्mतार गर्न र थुन्न पाउँथ्यो । पत्रिकामा लेखकहरुले प्रायः अर्को नाम राखेर प्रकाशित गर्दथे । मैले पनि उषा, प्रज्ञा, शोभा, आदिको नामबाट लेख लेख्ने गर्दथें । कतिपय लेखहरुमा नाम नै लेखिँदैनथेँ । कतिपय पुरुष नेताहरुले महिलाहरुको नाम लेख्ने गर्दथे ।
अन्तर्वार्ताको लागि म वहाँको घर थँहिटीमा पुग्दा वहाँ केही घरधन्दामा अलमलिरहनु भएको थियो । एकछिन कुरेपछि वहाँ आउनु भयो र मेरो जिज्ञाशा अनुसार आप्mनो अतितका अनुभवहरु सुनाउनु भयो । “हामी त साना थियौं । तैपनि साडी लगाएका थियौं । राणा प्रधानमन्त्रीकोे अगाडि पुग्दा साडीको सप्काले घुंंघट जसरी मुख छोपेका थियौं । राणा प्रधानमन्त्रीले किन आएको भनेर सोध्दा हामीले महिलाहरुले पढ्न पाउनु पर्ने, महिलाहरुले पनि रोजगारी पाउनु पर्ने, लगायतका मागहरु अघि सा¥यौं ।” उमेरले मभन्दा निकै जेठी भएपनि त्यहाँ मैले समान उमेरका साथी सरहको व्यवहार पाएँ । कुरा गर्दा वहाँका युवावस्थाको कामको जोशको चमक अभैm झल्कँदै थियो ।
०४५ सालमा तत्कालिन मालेको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो सम्मेलन भयो । २०४६ सालको आन्दानेलनको क्रममा बामपन्थी विचारधारा राख्ने पार्टीहरुको कार्यगत एकता भयो र पंचायती व्यवस्थाको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको घोषणा भयो । बाम एकताको संयोजक साहना प्रधान हुनु भयो । नेपाली जनताको राजनीतिक स्तन्त्रताको लागि पञ्चायतको बिरुद्धमा लड्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । त्यस चुनौतीको नेतृत्वमा महिला हुनु हामी नेपाली महिलाहरुको लागि साँच्चिकै गौरबको विषय थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि तत्कालीन माले र माक्र्सवादी पार्टीको एकीकरण भयो र नेकपा (एमाले) बन्यो । त्यस पार्टीको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा साहना प्रधान रहनु भयो । मेरो महासविचको स्थान अष्ट लक्ष्मी शाक्यले लिनु भयो । म केन्द्रिय सदस्यको रुपमा मात्र रहेँ । अध्यक्षको रुपमा काम गर्दा वहाँले त्यस संघको लागि सक्दो काम गर्नुभयो । तर कतिपय महिला साथीहरुबाट सहयोग नपाएको गुनासो वहाँले बेलाबेलामा मसंग गर्नु हुन्थ्यो । त्यो मैले पनि अनुभव गर्दै गएँ । पदाधिकारीको रुपमा जिम्मा लिने कतिपय महिलाहरु निरंकुश बन्दै गएको, सानो झुण्डको स्वार्थमा आशक्त बन्दै गएको, चाकडीमा र चाप्लुसीमा अभ्यस्त बन्दै गएको, पदको लागि मात्र लिप्त हुँदै गएको, देखावटी कामको सक्रियता देखाउदै गरेको आदि जस्ता मनोबृत्तिहरु हुर्कदै गएको अनुभव त मैले पनि गरेकी थिएँ । पार्टी भित्र मात्र होइन अनेमसंघ पंक्तिमा समेत आलोचना आत्मालोचनाको परम्परा खुम्चिँदै गयो । जस्ले सत्य बोल्न खोज्यो, उनीहरु संघबाट पाखा पर्दै गए । साहाना प्रधान मलाई भन्नु हुन्थ्यो, “संघमा टीम मिलेन भनेर साथीहरु सँधै गुनासो गर्छन्, काम गरिरहेका साथीहरुलाई हटाउन चाहन्छन् । तर यसको लागि खुला छलफल गर्न चाहँदैनन् । पिठूँ पछाडी त्यसरी गनगन गर्नु राम्रो होइन नि होइन र ?”
महिला तथा बालिकाहरुमाथि बलात्कार र हत्याका घटनाहरुको विरुद्धमा विभिन्न विचारधारमा आवद्ध महिलाहरुले संयुंक्त कार्यक्रमहरु अघि बढाए । साहना प्रधान सामाजिक अभियन्ताको रुपमा देखा पनि पर्नु भयो । अनेमसंघ कै सक्रियतामा महिला सुरक्षा दबाब समूह बन्यो र सहाना प्रधान त्यसको अध्यक्षको रुपमा रहनु भयो । महिला सुरक्षा दबाब समूह सबै खाले राजनीतिक विचारधारा बोक्ने, महिला हकहित अधिकारको विषयमा काम गर्ने महिलाहरुको साझा मञ्च थियो । त्यो मञ्चमा साहाना प्रधानलाई सर्वसम्मतिले चुने । वहाँ साझा महिला नेतृको रुपमा आजिवन काम गर्नु भयो । तर संघ भित्रै वहाँ सानो समूह राजनीतिको शिकार बन्नु भयो । एउटा वर्ष मार्च ८ को दिन वहाँले गर्दै आउने असहयोगको गुनासो सही सावित भयो । महिला सुरक्षा दवाव समूह र अखिल नेपाल महिला संघले संयुक्त रुपले जुलुसको आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो । तर कार्यक्रम गर्ने ठाउँमा म पुग्दा सहाना प्रधान लगायत विस तिस जना महिलाहरु मात्र जम्मा भएको देखेँ । सोध्दा थाहा भयो, अनेमसंघका अन्य साथीहरुले जुलुस अन्तै तिर डोहर्याउनु भएको रहेछ । राजनीतिक नेतृ हुनुको अर्थ मान सम्मान मात्र होईन, असहयोग र अपमान पनि खेप्नु पर्ने रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण थियो त्यो ।
तेंतिस प्रतिशत सिट महिलाहरुको निम्ति सुरक्षित गर्ने विषयमा हिजो आज एक से एक महिलाहरु छाती पिटेर भन्ने गर्दछन्, “त्यो प्रस्ताव ल्याएको मैले, मेरो पालामा वा मेरो संगठन वा मेरो पार्टीले हो ।” आदि आदि । तर मैले तेंतिस प्रतिशतको त्यो दृढ प्रस्ताव टुँडिखेलको खुला मञ्चबाट पहिलो पल्ट साहना प्रधानको मुखबाट सुनेकी थिएँ । त्यो सफल पनि भयो । त्यसको लागि यो सिङ्गो पुस्ताले आपूmलाई वहाँप्रति ऋणि मान्नै पर्छ ।
वहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएको वखत हामीले व्दन्दका पीडितहरुसंगै डेलिगेशनको रुपमा भेटेका थियौं । पीडितहरुको कारुणीक अवस्था देखेर वहाँले हाम्रो कार्यक्रममा बारुदी सुरुङ प्रतिवन्ध हुनु पर्दछ भनेर बोल्नु भएको थियो । त्यसपछिको धेरै समयको अन्तरालमा मैले वहाँलाई शान्तिको लागि सहकार्य नामको संस्थाको बैठकमा भेट्ने मौका पाएँ । दोश्रो पटक रणनीतिक योजना तयार गर्न बसेको बैठक धुलिखेलमा । केहि बर्ष हामी फेरि पनि एउटै कमिटीमा बसेर काम गर्यौं । असी बर्षको उमेर हुँदासम्म पनि वहाँले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर योगदान गरिरहनु भयो । काम गर्ने मान्छेको लागि उमेरको कुनै सीमा हँुदैन भन्ने उदाहरण पनि थियो त्यो ।
दुखको कुरा उहाँको दाजु गौरीभक्त प्रधान विसं २०६९ पौष ९ गते वित्नु भयो । शवयात्रा पूर्व गौरी भक्तको शवलाई तत्कालिन नेकपा एमालेको कार्यालय, बल्खुमा श्रद्धान्जलीको लागि राखिएको थियो । त्यहाँ मैले साहना प्रधानलाई भेटें । तर अत्यन्तै नाजुक परिस्थितिमा । वहाँ बोल्न र हिड्न सक्नु हुन्नथ्यो । व्हीलचियरको सहारा लिनु भएको थियो वहाँले । सबैसंग कुरा गर्दा सामान्य रुपले हातको औलाहरु प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो । केहि समय पछि वहाँ पनि वित्नु भयो ।
मानिसहरु जन्मिनु र मर्नु प्रकृतिको एक स्वभाविक नियम हो । तर भौतिक शरीर मात्र जन्म र मरणको परिभाषा होईन भन्ने कुरा स्व. साहना प्रधानले हामीलाई सिकाएर जानु भएको छ । स्व. साहना प्रधान जसको जीवन अरुको लागि सुम्पिनु भएको थिया,े वहाँ कहिले पनि मर्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्यो । वहाँ अजर र अमर भएर हाम्रो हृदयमा सधैं बाँचिरहनु हुनेछ । हार्दिक श्रद्धान्जली ।